"5 स्तम्भ" को नयाँ अवधारणा। यो के हो? कसरी खतरनाक?
हामी परिवर्तन को अवधि बाँचिरहेका छौं भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। तिनीहरूले बिस्तारै छैन गर्नेहरूलाई समयमा चकमा "नाश" सक्ने यस्तो गति प्राप्त छन्। सार तेजी साधारण नागरिकहरु गर्न संकेत मदत बुझ्न परिवर्तन "बेकन" को एक प्रकारको हुनुको मामलामा राम्रो निर्देशित हुनु आवश्यक छ को, कि तेजी भेला गति को घटना। ती सुरक्षित अभिव्यक्ति श्रेय गर्न सकिन्छ "5 स्तम्भ।" यो के हो? सामना गरौं।
Uninitiated पाठक, शायद गर्न announcers समाचार प्रसारण के, वाक्यांश एकदम साधारण लाग्न सक्छ सुन्नुहोस्। वास्तुकला बारेमा तर्क जस्तै केहि। यहाँ केवल Doric र ईओण स्तम्भहरू छन्, यो अभिव्यक्ति गर्न केही छ ...
पहिलो पटक यो 1936-1939 मा स्पेनी नागरिक युद्ध समयमा सामान्य Franco लागू गरियो। विचार गर्ने रियर मा ढकी एजेन्ट थियो। रेडियो ठेगानामा अवस्था वर्णन, उहाँले सेना को चार स्तम्भहरू बाहेक त्यहाँ पनि5स्तम्भ हो भन्नुभयो। यो टिप्पणी देखि स्पष्ट थियो के छ: ई Mola लुकेका अर्थ, जासूस नेटवर्क मैड्रिड मा सञ्चालन।
समय, शब्द एक घर शब्द भएको छ। अब संसारमा घटना मा रुचि नागरिक शायद जो कोहीले, आश्चर्य: "स्तम्भ5- के यो" त्यसैले overt र गुप्त जासुसहरूलाई, अपराधीहरूमाथि र किरा, मा शत्रु मदत सक्षम छन् केही व्यक्तिहरूले भनिन्छ एक महत्वपूर्ण अवस्था। यो "समाज" एक पैट्रियट चाहनुहुन्छ गर्दैन संग संख्यात्मक गर्न भनेर स्पष्ट छ। पाँचौं स्तम्भ - यी कुनै पनि मामला मा राज्य र यसको नागरिक दुवै को भरोसा जित्न सक्छौं नगर्ने मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले मातृभूमि सुरक्षा बारे सोच बिना साँघुरो आत्म-ब्याज आधारमा सञ्चालन।
के रूस मा एक "पाँचौं स्तम्भ" छ
समाज दुर्भाग्य, एक पैट्रियट छ र जो जो बारेमा गरम तर्क छैन, ठूलो छ र। अब सामूहिक पश्चिम गर्दछ जसलाई "सम्भावित शत्रु" मदत को आशङ्का सबै ती को unflattering शीर्षक निन्दा गर्नु "5 स्तम्भ।" यो के हो, आफ्नै व्यवहार प्रत्येक, भावना प्रतिद्वन्द्वीको बारेमा हेरचाह छैन। र सार्वजनिक "नरसंहार" नजिकै ... यद्यपि प्रामाणिक राजनीतिक वैज्ञानिकहरू एकदम स्पष्ट पहिचान छ आज रूस मा यो पाँचौं स्तम्भ छ।
सबै खराब सूचीमा पहिलो सबै belolentochniki समावेश - Bolotnaya वर्ग मा Commemorative घटनाहरू भाग लिए गर्नेहरूलाई। प्रभावकारी "नुस्खा" उपचार "रोगबाट" भेटी बिना पनि सक्रियतासाथ अधिकारीहरु आलोचना, (तिनीहरूले हरेक हक जो) राज्य को नीति मा आफ्नै दृष्टिकोण भएका ती नागरिकहरु। आफ्नो स्थिति को क्राइमन घटनाहरू उत्पन्न विश्वव्यापी वृद्धि समर्थन समाज को भाग मा अनुमोदन बाहिर अहिले छ।
थप परिष्कृत प्रतिनिधिको पाँचौं स्तम्भ
केही स्रोतहरु "समाज" गुप्त र overt रूस विरोधीको धेरै व्यापक कानुनी विरोध छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले विदेशीहरू जसको गतिविधिहरु प्रकृतिका विरोधी सरकार स्पष्ट छन् श्रेणीका। साधारणतया यो "शत्रु" जनसंख्या संग काम, को अधिकारीहरु संग एक कहिलेकाहीं दाबीले dissatisfaction सिर्जना। यो लामो मान्छे चिन्तित र रिस उठ्दैन रूपमा, कुनै पनि अवसर मिलेको। र कुनै पनि विदेशीहरू माग भने (तिनीहरूले हाम्रो देश सेवा गर्न आवश्यक छैन), त्यसपछि आफ्नो - एकदम अर्को कुरा हो।
5th स्तम्भ यसको बाँध्न रूस एउटा राम्रो आय प्राप्त गर्न मौका आकर्षित गर्छ। यी मान्छे, हाम्रा विरोधीहरू को हित मा काम गर्ने प्रायोजित क्षमता छ अहिलेसम्म सीमित जो वास्तवमा लुकाउन आवश्यक छैन। हो, र "नजिकिंदै" धेरै तीक्ष्ण रंगरुट गर्न। रूसी नागरिकहरूले दृश्य आफ्नो बिन्दु गर्ने अधिकार छ भन्ने विश्वास। इमानदार मानिस पाँचौं स्तम्भ सदस्य, एकदम सफासँग unobtrusively आफ्नो राय सच्याउन बनाउन र गर्न। र परिणाम के हो? अब तपाईं एउटा सानो घूस लागि अधिकारीहरु संग दुखी र भोलि हुनुहुन्छ पहिले नै, यो र्याली गर्न चलिरहेको छ आफ्नो लक्ष्य आधारमा आयोजकहरु द्वारा तल राखे कि inquiring छैन?
यो खतरनाक 5th स्तम्भ?
हामी प्रभाव पाँचौ स्तम्भ को आधार नगद झूठ भन्ने तथ्यलाई सुरु हुनुपर्छ। तिनीहरूले भन्दा रूसी अन्य उद्देश्यहरू पछि लाग्दा विदेशी नागरिकहरु द्वारा नियन्त्रित छन्। तिनीहरूले सधैं अवैध कार्य छैन। काम को भाग खुल्लमखुल्ला, मिडिया मा प्रकाशित सञ्चालन गरिएको छ सामाजिक प्रणाली कमीकमजोरी हाइलाइट गर्ने लक्ष्य छ कि परियोजनाहरु, कार्यहरू संगठनको वित्त। कानुनी कार्यहरू एकदम लोकतान्त्रिक चरित्र हो। उनीहरूको उद्देश्य, हामी गहिरो विचार भने - विरोधी-राज्य। पाँचौ स्तम्भ को गतिविधिहरु बलियो रूसी statehood सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएर। यो खुल्लमखुल्ला र covertly गरेको छ। बिस्तारै, तर निरन्तर स्तम्भ नागरिकहरु को मन यसको नकारात्मक प्रभाव exerts। तयारी भएको "खोल्दै बिन्दु", जहाँ तपाईं शक्ति को परिवर्तन माग सडकमा मानिसहरूलाई ल्याउन सक्छ गरिएका छन्। यो गतिविधि जनसंख्याको लगभग सबै खण्डहरूमा कवर धेरै विशेषज्ञहरु, समावेश छ। शत्रु शिविरमा, इन्टरनेटमा यसको लागि प्रतीक्षा फोरम, सामाजिक सञ्जाल मा को प्रतिनिधिको: सरल layman आवश्यक rallies जाने छैन। तिरस्कार कारण छैन ताकि विरोधी-राज्य भावनाहरू, बिस्तारै र ध्यानपूर्वक मान्छे मा इंजेक्शन छन्। खतरनाक लुकेका शत्रु हो। आफ्नो काम सबैले पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ छ, र यसरी समय मा अभिमुखिकरण गर्न र प्रभाव कठिन हुनेछ प्रतिबिम्बित।
फ्रान्स को प्रधानमन्त्री: यसको भूमिका र शक्ति
स्कूल वा सांस्कृतिक वस्तु को एक पासपोर्ट antiterrorist सुरक्षा के छ? विकास र पासपोर्ट को नमूना antiterrorist सुरक्षा
राजनीतिक मान्यता: एक उदाहरण। राजनीतिक परम्परा के हो?
जीवनी विक्टर Yanukovych युक्रेनको गरेको चौथो राष्ट्रपति
Lukashenko Aleksandr Grigorevich। बेलारुस को अध्यक्ष। फोटो, व्यक्तिगत जीवन
कार फ्लोरोसेन्ट रोशनी। विशेषताहरु, मोटर चालकहरुलाई समीक्षा
यो कवि Vvedenskiy Aleksandr: जीवनी र काम
टनेल Amur खबरोभ्स्क अन्तर्गत
नियम, संग्रह अंक मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा: ऊर्जा बचत दीपक को उपयोगिता
आवेदन विभिन्न सामाग्री देखि "मशरूम"
सजावटी वेल्स: आफ्नो हात Croft सजाउनु संग
असामान्य कला: Maykl पार्केस र आफ्नो जादू यथार्थवाद
पुरानो लुगा धुने मेसिन के गर्ने? केही व्यावहारिक सल्लाह
HSDPA - यो के हो? HSDPA बन्द बाध्य
Toyotomi Hideyoshi: तस्बिर, जीवनी, उद्धरण, गतिविधिहरु
बक्सर Dzho Kalzage: जीवनी, क्यारियर विकास